कतारमा आप्रवासी कामदारलाई नयाँ श्रम कानुन – News Portal of Global Nepali
9:52 PM | 3:37 AM
कतारमा आप्रवासी कामदारलाई नयाँ श्रम कानुन
13/12/2016 मा प्रकाशित
Dr Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, (right) Minister of Administrative development, labour and Social Affairs with Brigadier Mohammed Ahmed al Atiq, Assistant Director General of Directorate of Nationality, Borders and Expatriates Affairs during the press conference yesterday. Pic: Abdul Basit
दोहा । मंगलबारदेखि कतारले आप्रवासी कामदारका लागि नयाँ श्रम कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आप्रवासी कामदारका लागि निकै नै कठोर मानिएको ‘कफाला’ प्रणाली संशोधन गरी नयाँ श्रम कानुन लागु गरिएको हो । कतार सरकारले कफाला प्रणालीमा संशोधन गरी कामदारलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने श्रम कानुन लागु गरिएको हो ।
कफालालाई आधुनिक दास बनाउने प्रणाली भन्दै चर्को आलोचना गरिएपछि विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको कतारले कामदारलाई सहज बनाउने नियम लागु गरेको हो ।
नयाँ स्पोन्सरसिप प्रणालीले रोजगारदाता, कर्मचारी वा प्रवासी कर्मचारीका सम्बन्धलाई नियमन गर्नेछ । कतारको मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाई अमिरलाई पठाएकामा अमिरबाट डिसेम्बर १३ अर्थात् आजैका मितिबाट लागु हुने गरी स्वीकृत गरिएको थियो ।
कफाला प्रणालीमा रोजगारदाता वा मालिकले अनुमति नदिएसम्म शवसमेत स्वदेश फर्काउन सकिंदैन भने, कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । पासपोर्ट मालिकको हातमा हुन्छ, कामदारको काम, बसाई र आवतजावत रोजगारदाताले नियन्त्रण गर्छ । कफाला प्रणालीमा कामदारलाई दासको व्यवहार गरिन्छ । तर अब कामदारले चाहेको खण्डमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन् ।
नियम अनुसार बिदा र स्वदेश फिर्तिका लागि पनि कम्पनीले बिदा नदिए छुट्टै समिति बनाइने र त्यहाँबाट बिदा लिएर घर फर्किन सक्ने छन् । समितिले तीन दिन भित्रमा निर्णय गर्ने छ ।
कामदारले अब रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा साविकको रोजगारदातालाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने छ । अनुमोदन गराउनु पर्दैन । तर निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरेका कामदारले भने पहिल्यै जानकारी गराउनु पर्ने छ । काम परिवर्तन गर्न चाहने आप्रवासीले नयाँ ठाउँमा काम थाल्नुअघि प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
करार अवधि हुँदै रोजगारदाता परिवर्तन गर्नु परेमा भने साविकको रोजगारदाताबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । रोजगारदाताले अनुचित व्यवहार गरेको, शोषण गरेको प्रमाण देखाउन सके रोजगारदाता परिवर्तनको हक हुनेछ । नयाँ नियम अनुसार कतारमा काम गर्ने भिसा प्राप्तिका लागि करार अनिवार्य हुने र त्यस्तो करारपत्र आफ्नै देशमा हुँदै हेर्न सकिनेछ ।
नयाँ नियम घरेलु कामदारका लागिसमेत लाभदायी छ । कामदारको पासपोर्ट अनावश्यक राख्ने रोजगारदातालाई २५ हजार रियालसम्म जरिवाना गरिने छ । कतारमा २१ लाखभन्दा बढी आप्रवासी मध्ये झण्डै साढे चार लाख नेपाली छन् । कफाला प्रणाली खाडीका अरु देश बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, युएई र ओमानमा भने कायमै छ ।
सहमतिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एनआरएनएको प्रतिबद्धता
एनआरएनए अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी शुल्क १० लाख !
ओलीभन्दा १० बुँदे पक्षधर ‘पपुलर’
एनआरएनए निर्वाचन तालिका प्रकाशित, २६ र २७ डिसेम्बर मतदान
१८११०	पटक पढिएको
१३६७३	पटक पढिएको
१२९४३	पटक पढिएको
१२३८१	पटक पढिएको
१०९७२	पटक पढिएको